ကျပ် ၁ဝဝဝဝ တန် ငွေစက္ကူအတု ပြုလုပ်သူတစ်ဦးကို ချောင်းသာတွင် ဖမ်းဆီးရမိ၊ နည်းပညာအသုံးချစာအု?? - Yangon Media Group
ချောင်း သာမြို့နယ်အတွင်း ငွေစက္ကူအတု ပြုလုပ်သုံးစွဲသူတစ်ဦးကို ၂ဝ၁၈ ခု နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် ည ၁၁ နာရီ ၃ဝ မိနစ်ခန့်က ချောင်းသာ နယ်မြေရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ဖမ်းဆီးရမိထားသူသည် ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံမြို့ နေထိုင်နေ မင်းမင်းထွန်းဆိုသူဖြစ် ပြီး ပုသိမ်မြို့နယ်ရှိ ‘ဆေးလ်ဗား’ ကာရာအိုကေဆိုင်၌ ငွေရှင်းစဉ် အစစ်ကြားထဲ ကျပ် ၁ဝ,ဝဝဝ တန် ငွေစက္ကူအတု နှစ်ရွက်သုံးစွဲခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုတိယရဲမှူး ကြီးထွန်းရွှေက ”သူက ချောင်းသာသားလေ။ ကျိုင်းတုံကို ပြောင်း သွားတာ။ သူကလျှပ်စစ်ပစ္စည်း ပြုပြင်သူ။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်လည်း ရေးဖူး၊ ထုတ်ဖူးတယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ အခုကျိုင်းတုံဘက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်စရာရှိတာတွေ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သူက အတုထုတ်ပြီး အစစ်ကြားထဲထည့်သုံးခဲ့တာ” ဟု ပြောသည်။
စစ်ဆေးမေးမြန်းချက်အရ ၎င်းသည် ကျိုင်းတုံမြို့ရှိ နေအိမ်၌ ကျပ် ၁ဝ,ဝဝဝ တန်အစစ်အား Scan ဖတ်၍ Colour Printer ဖြင့် ကျပ် ၁ဝ,ဝဝဝ တန် ငွေစက္ကူအတု ၁ဝရွက်ထုတ်ခဲ့ပြီး မိဘများ နေအိမ်သို့ အလည်လာခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊ ကာရာအိုကေဆိုင်၌ ကျသင့်ငွေ ကျပ် ၇ဝ,ဝဝဝ အား ကျပ် ၁ဝ,ဝဝဝ တန် ငွေစက္ကူ အတုနှစ် ရွက်ကြားညှပ်ပေးခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့သည်။
¤င်းထံမှ အဆိုပါ ကျပ် ၁ဝ,ဝဝဝ တန်နှစ်ရွက်အပါအဝင် ငွေစက္ကူအတု ၁ဝ ရွက်၊ ငွေကျပ် ၃ဝ,ဝဝဝ နှင့် ၎င်းတည်းခိုအပ်နှံထားသော သူငယ်ချင်း ကိုထက်ထက် (စိစစ်ဆဲ)၏နေအိမ်မှ လက် တော့တစ်လုံး၊ ပရင်တာတစ်လုံးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ တက်ဘလက်တစ်လုံး၊ လက်ကိုင်ဖုန်းနှစ်လုံး၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ် ၁,၂၄၇,၅ဝဝ တို့အား သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ရာ မင်းမင်းထွန်းအား ချောင်း သာနယ်မြေရဲစခန်း (ပ)၃၁၇/ ၂ဝ၁၈၊ မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ် ဥပဒေပုဒ်မ ၁ဝ၅/၁ဝ၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း ရဲက ပြောသည်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် နေအိမ်များ၌ အလံလွှင့်ထူရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ တိုက်တွန်း
ဖမ်းဆီးခံထားရသော သတင်းထောက်နှစ်ဦး ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရေး ပုသိမ်မြို့တွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ?
ရီဟားနားမှာ အလွန် အကြောက်အလန့် ကင်းသူဟု အဒဲလ်ချီးကျူး